XOG RASMI AH+CADEYN: Madaxtooyada Soomaaliya oo xildhibaanadii ugu badnaa oo ka soo jeeda K/Galbeed iskugu geysay Muqdisho & Welwel lasoo darsay Shariif Xasan – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2017 October Wararka Maanta, Warbixino XOG RASMI AH+CADEYN: Madaxtooyada Soomaaliya oo xildhibaanadii ugu badnaa oo ka soo jeeda K/Galbeed iskugu geysay Muqdisho & Welwel lasoo darsay Shariif Xasan
XOG RASMI AH+CADEYN: Madaxtooyada Soomaaliya oo xildhibaanadii ugu badnaa oo ka soo jeeda K/Galbeed iskugu geysay Muqdisho & Welwel lasoo darsay Shariif Xasan
MUQDISHO(P-TIMES)- Xaafiiska Raysalwasaaraha Soomaaliya iyo Madaxtooyada ayaa awoodii ugu badneyd iskugu geeyey hadda sidii ay u tuuri lahaayeen Madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxayna bilaabeen qorshihii ugu dambeeyey oo ay 17-ka bishan codka kalsoonida ugu qaadi doonaan Shariif-ka oo ah nin saameyn ku dhex leh siyaasadda dalkan.
Xildhibaano gaaraya 34 Xildhibaan ayaa iskugu tagay shalay magaalada Muqdisho, waxayna ku qabsadeen kulan ay ugu magac-dareen kulanka Badbaadinta Koonfur Galbeed oo ay uga hadlayeen qorshahan.
Xildhibaanadii ka hadlay madashaas ayaa dhamaantood isku raacsanaa fikrada ah in xilka laga qaado Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee waqtigan Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo ay ku eedeeyeen waxqabad la’aan.
Shirkan waxaa kasoo dhex muuqday Lataliyaasha Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha Soomaaliya, kuwaas oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed, mid kamid ah oo hadlay wuxuu si adag u sheegay in aysan dawladda Faderaalku ku qanacsaneyn waxqabad la’aanta taagan.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa helay warsaxaafadeed laga soo saaray shirkas, oo sidda ka muuqata taageero iyo Hiilba lagu weydiisanayo dawladda Faderaalka Soomaaliya, oo la og yahay saameynta ay qadiyaddan ku leedahay.
Cabsi weyn ayaa laga qabaa talaabadaas haddii ay dhacdo waxyaabaha ka dhalan kara, waxaana halisteeda ay leedahay qadiyaddan, bacdamaa ay hadda jiraan xasaasiyad adag oo siyaasadeed, taas oo u baahan in xal rasmi ah laga gaaro.
Hal Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “XOG RASMI AH+CADEYN: Madaxtooyada Soomaaliya oo xildhibaanadii ugu badnaa oo ka soo jeeda K/Galbeed iskugu geysay Muqdisho & Welwel lasoo darsay Shariif Xasan”
abdiwel October 12, 2017 at 5:39 pm · Edit
sida kaliya ee sharif sakin uga nabad heli karo dowlada Qanduur Qaran waa in uu xoojiyo xiriirka saaxiibada cusub ee uu ku yeshey madaxda dowladaha xubnaha ka ah federalka